နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: 2012
(နောက်ထပ် ဆုတောင်းမိနေတာ တစ်ခုရှိသေးတယ်.....
သေချာမသိသေးပေမဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ တချိန်ချိန်မှာတော့
အဲဒိ အိပ်မက်ဟာ ချစ်မကြီးရဲ့အိပ်မက်လဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ
ညလေးသိနေတာမို့ အမေစုရှိတဲ့ ချစ်မကြီးချစ်တဲ့
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ “ မ ”
I love u so much and
GetaHappy New Year !!!
Arr bwarr :)))
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 4:01 AM 15 comments:
ဝေးးးးးးးးးးးးးးးးးး ပျော်ထှာ..... နာ့ဘလော့လေးပြန်ဖွင့်လို့ရပြီကွ..... ဟာဟ.......မိုးနတ်မင်းကြီး ပြန်လာပါပြီ.... ထို့ကြောင့် နတ်သားလေးများနှင့် နတ်သမီးလေးများကို ပျော်ပါစေကြောင်း
သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါ၏...... ဟိ..... ဘူမှလဲ မေးပဲနဲ့ စွတ်ပြောနေဒယ် ...ဇွတ်.....:P အစကတော့ မိုးနတ်ရဲ့
ဘလော့လေးဖွင့်မရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရယ်စရာဟာသလေးစွက်လို့ ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်လောက် ရေးပြီးတင်မလို့ပါ.....(အစကပြောပါတယ်) ခု....မဟုတ်တော့ဘူးနော်..အဲလို..:)
မကောင်းတာနဲ့အညီ ရှည်လျားလွန်းသော ထိုပို့စ်ကို တင်ရန်
အကြံကိုလက်လျှော့လို့ ( အင်း......ဘလော့နဲ့ဝေးသွားတာ လ၀က်လောက်ပဲရှိသေးတယ်....လေသံက ခပ်စိမ်းစိမ်း.....အာ......ဟုတ်ပါဘူးးးးးးးး အဲလိုမထင်ကြပါနဲ့
ဘလော့ဂါမောင်နှမတို့ရယ်....အားလုံးကို မိုးနတ်အရမ်းပဲ သတိရနေပါတယ်...ပို့စ်လေးကိုလဲ စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ရေးပြီး တင်မယ်ကြံကာမှ လိုင်းကလဲ ၀င်သက်ထွက်သက်..........
တခါတလေဆို လုံး၀၀င်လို့မရတဲ့နေ့တွေတောင် ရှိသေးတယ်...) အဲဒါကြောင့် ဘယ်သူ့ရဲ့ သဘောတူညီမှုမှ မယူပဲ ကိုယ့်တဦးတည်းရဲ့သဘောနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားကို
ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ် ........ဘာတဲ့........ “ အဲဒိအခန်းကျော်လိုက် ” .......ကောင်းကွာ......... ဒါထက် မြန်မာပြည်ရဲ့ ကော်နက်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိုးနတ် စာတိုလေးရေးထားတာရှိတယ်......အားပေးကြအုံးမလား....
fb မှာတော့ တော်တော် like ကြတယ်..
ပြီးတော့ မိုးနတ်ကိုလဲ မေးကြတယ်....“ မင်းက ရက်ပါလေဒီလားဟင်” တဲ့ ......
မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ
ဘ၀......ဘ၀......ဘ၀.........................(ဟိ ဘာမှလဲ ဟုတ်ပါဘူး....ကြုံတုန်းတင်ပြလိုက်တာပါ..ဒီလိုပဲ)
ပြီးတော့ လူစုံတုန်း ရှင်းပြစရာ တစ်ခုရှိပါတယ်... ( ဒါကတော့ အတည်ပါ ) တကယ်တော့ ဒီအကြောင်းကို သီးသန့်ပို့စ်
တစ်ခုအနေနဲ့ ရေးပြီး တင်မလို့တောင် စဉ်းစားထားသေးတယ်.... ခုတော့ လူစုံတုန်း ရှင်းပြလိုက်တော့မယ်နော်........
မိုးနတ် ဟိုအရင်ရက်တုန်းက အသဲကွဲနေတယ်လို့ အားလုံးကို မက်ဆေ့ခ်ျပေးဖူးပါတယ်......ကဗျာအောက်နားလေးတွေမှာပါ....... ဟုတ်ပါတယ်........မိုးနတ်တကယ်အသဲကွဲခဲ့ပါတယ်....
ဒါပေသိ.... ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ အားလုံး
ထင်မြင်ယူဆနေကြသလို မိုးနတ်ချစ်သူက မိုးနတ်ကို
မိုးနတ်က ခုချိန်မှာ သူ့ကို မရွေးချယ်နိုင်သေးလို့ မသေချာတဲ့
အချိန်တွေကို မျှော်လင့်စောင့်စားမနေကြပဲနဲ့ လမ်းခွဲဖို့ ပြောလို့ သူက စိတ်ဆိုးပြီး မိုးနတ်နဲ့လမ်းခွဲသွားတာပါ....
အဲဒိအတွက် မိုးနတ်သူ့ကို နဲနဲလေးမှ အပြစ်မတင်ခဲ့ပါဘူး....
မိုးနတ်ဘက်ကအလွန်ကိုး......သူကပြောဖူးတယ် မိုးနတ်မှာ အချစ်ထက်ဦးစားပေးရမဲ့အရာတွေ တော်တော်များတယ်ထင်တယ်တဲ့...
ဟုတ်ပါတယ် မိုးနတ်ကလဲ သိပ်ကိုလောဘကြီးတဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေးမို့ သူ့လို ရိုးသားအေးချမ်းပြီး
ရောင့်ရဲ့တင်းတိမ်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ ဘယ်လိုမှကို မလိုက်ဖက်ပါဘူး.....တကယ်တော့ ရင်ထဲမှာသူ့ကိုသိပ်ချစ်တာပေါ့
(အဲဒါ အမှန်ကို ၀န်ခံတာ....ပြီးတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ...)
သူ့အကြောင်းတွေကို ပြောရတာ ဘယ်တော့မှ မကုန်နိုင်ဘူး
ဒီကြားထဲ ကွန်က ကျသွားရင် မိမိုးနတ်တို့ ငုတ်တုတ်မေ့ရအုံးမယ်လေ......လိုရင်းကိုပဲ ပြောပါမယ်......
မိုးနတ်တို့ အချစ်က အနေဝေးလွန်းတာနဲ့အမျှ ဖြူစင်ရှင်းသန့်တာနဲ့
အညီ မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်ကို သိပ်ချစ်ကြတယ်....
အဲဒါကြောင့် သူနဲ့ဝေးရတဲ့နောက်မှာ မိုးနတ်သိပ်ခံစားခဲ့ရတာပေါ့......
ပြီးတော့ မိုးနတ်က ကဗျာတွေရေးနေတဲ့သူဆိုတော့ (ကဗျာဆရာမလို့
မပြောဘူးနော်...:) ) ကဗျာရေးတဲ့သူတွေဆိုတာ......
(ပြောရရင် မောင်လေးတစ်ယောက်က မေးဖူးသလိုပေါ့)
အမ.. ကဗျာဆိုတာ ခံစားချက်ရှိမှရေးလို့ရတာမလားတဲ့ ....
ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု...ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ကွက်.....တခါတခါ ဖတ်မိလိုက်တဲ့ စာတိုလေးတစ်ကြောင်း...တခါတခါ အတွေးလေးတစ်စ ဒါမှမဟုတ်
နားထောင်ဖြစ်လိုက်တဲ့ သီချင်းလေးထဲကလဲ ကဗျာတစ်ပုဒ် ထွက်လာတတ်တယ်လို့ ဖြေလိုက်မိတယ်.....အားလုံးပဲ
ကဗျာရေးဖူးကြတဲ့သူတိုင်း သိကြမှာပါ....တခါတလေ အတွေးလေးတစ်စရမိတာ......ညကြီးမင်းကြီး အိပ်ရာထဲရောက်မှ
စာအုပ်နဲ့ခဲတံ..ကောက်ကိုင်ပြီး ကမန်းကတန်း ထရေးလိုက်ရတယ်
ခုတလောဆို အဲလိုခဏခဏ ဖြစ်တယ်......ဘာလို့လဲ မသိ..........အာရုံဝင်စားမှုများလာလို့ထင်တယ်:P
(မိုးနတ်က ကဗျာရေးရင် ဘောပင်နဲ့ တစ်ခါမှမရေးဘူး......ခဲတံနဲ့ပဲရေးတယ်....
ဟာ.....ပြောရင်းနဲ့ ဆိုလိုရင်းက ပျောက်ပြီး လမ်းကြောင်းက လွဲသွားပြန်ပြီကွာ....တကယ်ပဲ........:)
ပြောချင်တာက မိုးနတ်က ကဗျာတွေရေးဖြစ်နေတဲ့သူဆိုတော့ ကုန်ကြမ်းရတဲ့အခါမှာ (ပြောရရင်....အသဲကွဲတယ် ဆိုတာလဲ
ကုန်ကြမ်းတစ်မျိုးပေါ့နော်....) အဲဒိအခါ ကိုယ်ခံစားရတာကို အခြေခံပြီး ရင်ဘတ်ထဲက စကားလုံးတွေက အရောင်စုံထွက်ကျလာတာပေါ့......
စိတ်ကြည်နူးမိခဲ့ရတာလေးတွေကို ပြန်တွေးမိရင် ကဗျာလေးတွေက
နူးညံ့မယ်......မိုးနတ်တို့ဝေးကွာသွားရတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့ အခါကျရင် ကဗျာလေးတွေက ကြမ်းတမ်းအက်ရှပြီး ခါးသီးနေမှာပေါ့
တခါတခါ ကဗျာတွေက ခံစားချက်ပြင်းသွားတဲ့ အခါ လူတွေက မေးကြတယ်....မိုးနတ်ချစ်သူက တော်တော်ဆိုးလားတဲ့...
ဟင့်အင်း.......ဆိုးသားဆိုးရင် မိုးနတ်ကသာ ဆိုးတာပဲဖြစ်မှာပါ
သူကတော့ ...........ထားပါလေ.......ခုက စလို့ ရှေ့ကို
မိုးနတ်ပို့စ်တင်တဲ့အခါမှာ “ ကို ” ဆိုတဲ့ ပုရိသ တစ်ယောက်အကြောင်း ထဲ့ရေးတော့မှာ မဟုတ်သလို သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကဗျာတွေ အသဲကွဲတဲ့အကြောင်းတွေလဲ ပြည်ဖုံးကားချလိုက်ပါပြီ....
နောက်ဆို စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ပဲ မိုးနတ်နေသွားတော့မှာပါ........
ကဗျာတွေကိုလဲ အရင်ကထက် နှစ်ဆတိုးပြီးရေးလို့
ပို့စ်အသစ်တွေကိုလဲ တစ်ပါတ်တစ်ခါ မှန်မှန်တင်ပေးပါ့မယ်......
အားလုံးကိုလဲ အရမ်းပဲ သတိရနေပါတယ်........
ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့ မထင်မှတ်ပဲ ၀န်ခံချက်တွေများပြီး ရင်ဖွင့်စာလို
ဖြစ်သွားတဲ့ပို့စ်လေးကို သီးခံပြီးဖတ်ပေးကြတဲ့ မောင်နှမတွေကို
Merry Christmaxxxxxxx !!!
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 6:25 AM 27 comments:
ကြင်နာတတ်တဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့ သူက
သူ့ရဲ့ ရင်ခွင်ဟာလဲ ကျွန်မအတွက်တော့
ဒိထက်ပိုပြီး ပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀
လမင်းကြီးလဲ ကျွန်မသစ္စာကို ယုံကြည်ပေးသင့်ပါတယ်
တည်တည်ခန့်ခန့်လေး (နောက်ပြီး )
နွေးထွေးတဲ့ သူ့ရဲ့ ရင်ခွင်မှာလဲ
( ချစ်ကိုကြီး အကိုလွင်ပြင်နဲ့ ချစ်မကြီး မမစံပါယ်တို့ရဲ့ (၇) နှစ်မြောက်အမှတ်တရနေ့လေးကို မိုးနတ်
နေမကောင်းလို့ လိုင်းပေါ်မရောက်တာနဲ့ မသိခဲ့ရပါဘူး...အဲဒိအတွက် အမှတ်တရအနေနဲ့ နှစ်ယောက်စလုံး
နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ကဗျာလေးရေးပေးချင်ပေမဲ့ အရင်အခေါက်က မိုးနတ် တင်ထားတဲ့ “ အဖော်မွန်” ကဗျာလေး
လဲရှိနေတာမို့ တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက်ပဲ ကဗျာတွေ ရေးပေးတော့မယ်လို့ စိတ်ကူးရမိပါတယ်..
အမှန်တော့ အရင်ကတည်းက ကဗျာလက်ဆောင်ရေးပေးဖို့ စိတ်ကူးရှိခဲ့တာပါ...အဲဒါကြောင့်အကိုလွင်ပြင်ရဲ့ သဲဘုစု အတွက် အရင်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်....အဟိ......ချစ်ကိုကြီးအတွက် ချစ်မကြီးထက် အရေးတကြီးနဲ့ ဦးစားပေးတဲ့အရာမရှိဘူးဆိုတာ ညလေးသိတယ်နော်....ချစ်ကိုကြီးရေ....ညလေး အလိုက်သိတယ်ဟုတ်..
ချစ်မကြီးလဲ ညလေးရေးပေးတဲ့ ကဗျာလေးဖတ်ပြီး သဘောကျနှစ်သက်နိုင်ပါစေ...
ချစ်မကြီးနဲ့ ညလေးနဲ့ကတော့ ရင်ဘတ်ချင်းညီမယ်လို့တော့ ထင်တာပဲမရယ်....
ကျန်တဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေလဲ အားလုံးကို မိုးနတ်အရမ်းကို သတိရနေတယ်...
ပြန်ကြည့်တော့ မတွေ့ကြတဲ့ ရက်စွဲတွေက သိပ်မကြာသေးသလိုပဲ....
ဒါပေမဲ့ မိုးနတ်စိတ်ထဲမှာတော့ သိပ်ကြာလွန်းတယ်....
ကြိုးစားပြီးတော့ မိုးနတ်ပြန်လာနေပါပြီ.....ဒါပေမဲ့ မိုးသူပြောသလို ကွန်ပြူတာကို အာသာပြေရုံလောက်
သုံးမှ မိုးနတ်ခေါင်းက သက်သာမှာမို့ ဟင့်....ဟင့်......နဲနဲတော့ ငိုချင်နေတာအမှန်ပဲ....ဟဲ..ဟဲ
ဘယ်သူမှလဲ ချော့မဲ့သူရှိဘူးကွာ......ဟာ....ဟာ ရင်နာတယ်.....)
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 7:34 AM 15 comments:
Labels: ရင်တွင်းဖြစ် အချစ်ကဗျာများ, အမှတ်တရ...
မပြောင်းလဲပဲ အရင်အတိုင်း ရှိနေတာက ငါ့နှလုံးသား
မီးလင်းဖို နွေးနွေးလေးဘေးမှာ ထိုင်ငေးရင်း
ဟိုစဉ်ကလိုပဲ မင်းအနမ်းတွေဟာ အသစ်...အသစ်
ရီဝေယစ်မူး အထိအတွေ့တွေဟာ အသစ်... အသစ်
သံစဉ်ချိုတဲ့ အပြာရောင်အိပ်မက်တွေဟာ အသစ်...အသစ်
မင်းအချစ်တွေသာ အသစ်ဖြစ်မလာတာ ဆိုးရွားလွန်းလှတယ်
ဥပေက္ခာ နှလုံးသားကို အစိမ်းရောင်ခြယ်
ဒီညလဲ တကိုယ်တော် အိပ်မက်ကိုပဲ
( မမရိုးမြေကျ ပြောသလို စာတွေအဆက်ပြတ်သွားမှာ စိုးလို့သာတင်ရတယ် ..မိုးနတ်ကွန်ပြူတာကို မကြည့်
နိုင်သေးပါဘူး..ခု အသစ်တစ်ပုဒ်တင်ဖို့တောင် မနဲ အားတင်းပြီး ကွန်ပြူတာကို ကြည့်ရပါတယ် အဲဒါကြောင့် နေကောင်းမှ အိမ်တွေလိုက်လည်ရင်း စာကြွေးတွေဆပ်ပါရစေနော်..မိုးနတ်ကို
နားလည်ပေးပါရှင်.....အားလုံးကို သတိရနေပါတယ်နော်.........အားလုံးရဲ့ မိုးနတ်ကြယ်စင် )
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 5:44 AM 16 comments:
မမျှော်လင့်ပဲ ဆုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ မင်းဟာ
ကိုယ်က မင်းရဲ့ဘေးနားမှာ အားပေးလို့
မင်းလဲကျ ရှုံးနိမ့်ချိန်မှာ ကူညီဖေးမမဲ့သူဟာလဲ
ကိုယ်တို့ နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ ဘ၀ဟာ
အမြဲမခွဲပဲ လက်တွဲအတူတူ ရှိနေကြမယ်နော်
ဒီကဗျာလေးက ရေးထားတာ တော်တော်ကိုကြာနေပြီ...ပြောရရင် ကဗျာရေးတတ်ခါစကလက်ရာလေးပါ..
( အမှန်တော့ ကဗျာအသစ်တွေရေးထားတာ အများကြီးရှိပါတယ်...ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေကိုလဲ
ပေးဖတ်ချင်တာတွေ အများကြီးပါပဲ...ဒါပေမဲ့ ဒီရက်ထဲ မိုးနတ် စိတ်လေနေလို့..ပြီးတော့ ကွန်ပြူတာကို
ကြာကြာကြည့်ရင်လဲ ခေါင်းကမူးမူးနေလို့...အိမ်တွေလဲ သိပ်မလည်နိုင် ပို့စ်သစ်တွေလဲ တင်ချင်စိတ်မရှိ
ဖြစ်နေရပါတယ်...အားလုံးနားလည်ပေးကြပါနော်...မတွေ့ကြပေမဲ့ အားလုံးကိုသတိတရရှိနေကြောင်းပါရှင် )
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 5:22 AM 19 comments:
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 6:31 AM 13 comments:
မြင်မြင်သမျှ အရာအားလုံးဟာ အဆန်းအပြားတွေချည်းပါပဲ ။
ဒါပေမဲ့ တခမ်းတနားနိုင်လွန်းတဲ့ အဲဒိအရာတွေက ကျွန်မရဲ့ စိတ်အာရုံကို မဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ ဘယ်အရာကိုမှ တွယ်တာ မက်မောလို့လဲ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး...၊ တခြားမိန်းမတွေလို မောင့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ၊ ဂုဏ်ဒြပ်တွေအပေါ်မှာ သာယာတာမျိုးလဲ တစ်ခါဆို တစ်ခါမှ မဖြစ်ခဲ့ဖူးပါဘူး...။ မောင်ရယ်....ကျွန်မရဲ့ စိတ်ကို တကယ်ပဲ မသိလေရော့သလားကွယ်. ..မောင့်ကို ချစ်တယ်...
မောင်နဲ့ပဲ အတူတူနေချင်တယ်...သက္ကရာဇ်တွေ ကုန်ဆုံးသွားလို့
နောက်ထပ်ကမ္ဘာတစ်ခုရဲ့ သက္ကရာဇ်တွေ ပြန်စတဲ့အထိ
ကျွန်မတို့တွေ အတူတူ နှစ်ယောက်တစ်ဘ၀ကို အာဒံနဲ့ ဧ၀လို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းကြမယ်လေ...မောင့်ရဲ့ အနမ်းတွေနဲ့ မျက်နှာသစ်ပြီး နိုးထချင်တယ်.၊..ညအိပ်ယာဝင် မှေးစက်တဲ့
အချိန်တိုင်းမှာလဲ မောင့်ရင်ခွင်ထဲမှာ နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ အိပ်စက်ချင်တယ်..၊တရေးနိုးလို့ ထကြည့်မိတိုင်း မောင့်ရင်ခုန်သံဟာ ကျွန်မနဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်လို့နေမယ်..၊. သန်းခေါင်ယံထက်နက်တဲ့ညမှာ
မောင့်မျက်နှာကို.. ကဗျာတစ်ပုဒ်လို.. ဖတ်ကြည့်ရင်း တိတ်တခိုးများ နမ်းလိုက်မိရင် ကောင်းကင်ပေါ်က လမင်းကြီးနဲ့ ကြယ်လေးတွေ
တောင် ရှက်လို့နေမလားပဲ...၊..မောင်ရယ်..ဘာလို့များ အချိန်တွေ ဆွဲနေတော့မှာလဲကွယ်...ရာဇ၀င်တွင်မဲ့ ကျွန်မတို့ အချစ်တွေ ဂန္တ၀င်မြောက်ဖို့...မောင်မက်မောတဲ့ ကျွန်မ မနှစ်သက်တဲ့ ဂုဏ်ပကာသနတွေကို ချန်ရစ်လို့ ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့
အပြာရောင်နေ့ရက်တွေဆီကို အခုပဲ သွားကြပါစို့..........
(ကဗျာ အသစ်တွေတင်ဖို့ ရှိပေမဲ့ မနေ့ညက တွေးလိုက်မိတာလေးကို
ချရေးလိုက်မိတာ စာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားတယ်..ကဗျာမဟုတ်ပေမဲ့ အားပေးကြပါအုံးနော်....:P..)
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 5:13 AM 27 comments: